UPDATE: Mareykanka oo duqeyn culus ka geystay Jilib & carruur ku dhimatay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Mareykanka oo duqeyn culus ka geystay Jilib & carruur ku dhimatay
UPDATE: Mareykanka oo duqeyn culus ka geystay Jilib & carruur ku dhimatay
Jilib (Halqaran.com) – Diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha wadin ayaa galabta duqeyn culus ka geystay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, taasoo sababtay dhimashada dad shacab ah (rayid).
Ilaa iyo dhawr gantaal oo is xig xigay ayaa gilgilay Degmada Jilib iyo deegaannada ku xeeranba, waxayna baqdin xoog lihi ku dhalisay bulshada ku dhaqan degmadaasi, oo ay maamusho Ururka Al-Shabaab.
Wararka ka imaanaya degmada Jilib ayaa sheegaya, in mid ka mida gantaalkaasi uu haleelay guri ay degan yihiin dad rayid ah, wuxuuna burburiyay gurigaasi, waxaana la ogyahay inay ku dhinteen laba wiil oo xilligaa ku cayaarayay guriga bannaankiisa.
Dadka reer Jilib ayaa waxay sheegeen guriga uu gantaalka haleelay ay suurtagal tahay in dad ku jiray ay ku dhinteen duqeyntaasi. Maleeshiyada Ururka Al Shabaab oo tegay gurigaasi ayaana xiray dhammaanba waddooyinka soo gala.
Labada wiil ee illaa iyo hadda la ogyahay inay duqeyntaasi ku dhinteen ayaa midkood uu jiray 8 sano, halka kan kalana uu 13 jir ahaa, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ku nool.
Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaan weli wax war ah ka soo saarin weerarkan ugu dambeeyay, ee Arbacada maanta ah ka dhacay Degmada Jilib.
Duqeyntaan ayaa ku soo aadaya, xilli Mareykanka uu shalay qirtay in duqeyn uu sanadkan ka gaystay Degmada Jilib, ay sababtay dhimasho haweeney iyo dhaawaca saddex kale oo dhamaantood dad shacab ahaa.